HTC မှာဘာမှားသလဲ ထွက်ခွာခြင်း၊ ပထမ ဦး ဆုံးဘေးအန္တရာယ် ... | Androidsis
HTC မှပရမ်းပတာဖြစ်ခြင်း - အလုပ်ပြုတ်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုပြproblemsနာများနှင့်ပထမတစ်ခုသည်ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်သည်
Kouji Kodera သည်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကုမ္ပဏီမှထွက်ခွာခဲ့သည်။ Kodera ဖြစ်ခဲ့သည် ခြုံငုံမဟာဗျူဟာများအတွက်တာဝန်ရှိသည် One ထုတ်ကုန်ပြီးနောက်ချက်ချင်းပင်ဤထွက်ခွာသွားမှုသည် HTC ထုတ်ကုန်များဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သောသုံးလအတွင်းထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီမှထွက်ခွာခဲ့သည့် Kodera သည် HTC မှမဟုတ်ပါ န်ထမ်းတစ် ဦး စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအရေအတွက်ကဆုံးရှုံးခဲ့ရသည် အလွန်တိုတောင်းသောကာလ၌။
မကြာသေးမီက Jason Gordon လည်းကျောင်းထွက်ခဲ့သည်ကုမ္ပဏီအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးဒုဥက္ကpresident္ဌ။ အခြားထိပ်တန်းရလဒ်များမှာ Global Retail Merchant Manager Rebecca Rowland၊ Digital Marketing Director John Starkweather နှင့် Product Strategic Manager Eric Lin တို့ဖြစ်သည်။
Starkweather သည် AT&T သို့ဆိုက်ရောက်စဉ် Lin နှင့် Rowland တို့သည်မိုက်ကရိုဆော့ဖ်တွင်ပူးပေါင်းခဲ့ကြသည် (ဂေါ်ဒွန်သည်သူတို့၏ ၀ င်ရောက်မှုကိုကြေငြာခြင်းမရှိသေးပါ) ဘာကြောင့်အားလုံးကထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီကိုစွန့်ခွာခဲ့ကြတာလဲ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ?
HTC သည် Seattle တွင်အခြေစိုက်သော USA ၏ရုံးချုပ်ရှိပြီး၎င်းမှမှတ်ချက်ပေးသည် - « HTC ကို Seattle တွင်သိသူတိုင်း၊ သူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်သွားချင်ပါဘူး အခုပဲ။ သူတို့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်က T-Mobile လိုပဲ " စာပိုဒ်တိုများနှင့်အဆုံးသတ်ထားသည် "သူတို့ကအခမဲ့ကျဆုံးခြင်း၌ရှိကြ၏".
လျှို့ဝှက်ချက်မဟုတ်ဘူး HTC ကပိုကောင်းသောနေ့ရက်များမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်, နှစ် X နှစ် ဦး စလုံးနှင့်သူတို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်ရှိသည်နှစ်ခုလုံးအတွက် ဆွဲရန်သူ၏ကြိုးပမ်းမှုအတွက်ပျက်ကွက် Samsung ကဈေးကွက်ဝေစုအချို့ကိုရယူသည်။
ဒါဟာတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ဘူး ဒီ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာထွက်ခွာသွားသူတွေဟာအကြီးအကျယ်ထိခိုက်ခဲ့ရပါတယ် ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှ Scott Croyle ဦး ဆောင်သည့်ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲဒီဇိုင်းအဖွဲ့များသည်ဆီယက်တဲလ်ရှိ Drew Bamford မှ HTC ၏အရောင်းအဆင့်တွင်အချိုးအစားမညီမျှမှုရှိနေသည်။
HTC ၏ပထမ ဦး ဆုံးဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ဖုန်း
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင်ထိုင်ဝမ်အော်ပရေတာ FarEasTone မှလာသည့် CMO အသစ် Ben Ho နှင့်အတူဖြစ်နိုင်သည် တာဝန်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုဝေမျှပါ ယခုမှစ။ လိုက်နာရန်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်မဟာဗျူဟာအတွက်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ယူပြီး။
စိတ်ဓာတ်လည်းကျဆင်းသွားသည် HTC ပထမအကြိမ်၏ဆိုးဝါးသောပစ်လွှတ်မှုကြောင့်ပြီးခဲ့သည့်Aprilပြီလကစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သော Facebook စမတ်ဖုန်းဟုလူသိများ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှကူးယူထားသောကူးယူထားသောဗားရှင်းအားဖြန့်ချိရန်ရည်ရွယ်ချက်ကိုမူလကသဘောတူခဲ့သည် Facebook Home ကို ထူးခြားသောနှောင့်နှေးမှုတစ်ခုဖြင့် HTC ပထမသီးသန့်ကိုကာလတစ်ခုပေးသည်။
အဲဒီအစား, Facebook ကသူ့ရဲ့လမ်းပြမြေပုံကိုပြောင်းလဲလိုက်သည် ပထမအကြိမ်ဖြန့်ချိသည့်ရက်သတ္တပတ်တွင်ပင်ဂူဂယ်လ်ပလေးတွင် Facebook Home ကိုဒေါင်းလုပ်ရယူရန်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ကောလာဟလများအရ HTC First သည်ရောင်းအားအလွန်ညံ့ဖျင်းသောကြောင့်ရုတ်တရက်သေဆုံးခြင်းနှင့်နီးစပ်ကြောင်းအော်ပရေတာများနှင့်စာချုပ်တွင်ဒေါ်လာ ၉၉ မှ ၉၉ ဆင့်အထိပြောင်းလဲမှုကြောင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်သည်။ အချို့သတိပေးသည့်အတိုင်း terminal သည် "ဘေးအန္တရာယ်" ဖြစ်သည်။
ထို့နောက်ကာလကြာမြင့်စွာ HTC ၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Peter Chou ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ကြည့်ရသည်မှာ Chou ကသူထွက်ခွာမယ်လို့ကတိပေးခဲ့တယ် အဓိကအချက်ကတော့အရောင်းရဆုံးမဟုတ်ဘူး။ HTC မှအဖွဲ့ဝင်များက One ထွက်ခွာခြင်းမပြုမီ Chou အားထောက်ပံ့ရေးနှင့်ထုတ်လုပ်မှုတွင်နှောင့်နှေးနိုင်သည်ဟုသတိပေးခဲ့သော်လည်းရှေ့သို့တိုး။ ထိုသတိပေးချက်များကိုလျစ်လျူရှုခဲ့သည်။ အကယ်စင်စစ်တစ်ခုမှာဖြန့်ချိပြီးနောက်စာရင်းပြproblemsနာများနှင့်အထူးသဖြင့်အနက်ရောင်ဗားရှင်းနှင့်အတူပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အဖြူနှင့်ငွေရောင်ကဲ့သို့သောပြီးပြည့်စုံသောအပြီးသတ်မရှိ။
Peter Chou သည် HTC ၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်သည်
Samsung Galaxy S4 ကိုကမ္ဘာအနှံ့စတင်ဖြန့်ချိသည့်အချိန်တွင်အဆိုပါအခက်အခဲများသည်အရေးကြီးသည့်အချိန်တွင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ ကြောင်းမှတ်ချက်ရှိခဲ့လျှင် လူတိုင်းရဲ့နှုတ်ခမ်းပေါ်က Samsung ဟာအကြွင်းမဲ့လွှမ်းမိုးမှုပဲပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ One ကရမှတ်များပေးပြီး S4 ကိုအားနည်းနေသောနေရာများတွင်ထိတွေ့ခဲ့ရသော်လည်းတောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီကြီးသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်မျက်နှာပြင်နှင့်ပရိုဆက်ဆာကြီးမားသည့်ကြော်ငြာသုံးစွဲမှုနှင့်အတူကြော်ငြာသုံးစွဲမှုနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းသည်အလွန်ခက်ခဲသည်။
Samsung အတွက် Android ဈေးကွက်ကိုလွှမ်းမိုးထားခြင်းကြောင့်ယခုနှစ်အတွက် HTC အတွက်မလွယ်ကူလှပါ။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကို Google Play မှတဆင့်လူတိုင်းလက်လှမ်းမီစေရန် ဦး စားပေးပြီးမိုက်ခရိုဆော့ဖ်က Nokia ကိုအာရုံစိုက်သည်။ ကြည့်နေ HTC One X တန်ဖိုးရှိသောအရည်အသွေး ကုမ္ပဏီမှအရေးကြီးသောရာထူးနေရာမှထွက်ခွာလာခြင်းနှင့်အတူသူတို့၌ရှိသောပြtheနာများ၊ Sony, LG, Samsung နှင့် Motorola စသည့်ကုမ္ပဏီများအကြား Android စျေးကွက်ဝေစုပိုမိုရရှိရန်အတွက်ရုန်းကန်နေရခြင်းသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးပုံရသည်။
Samsung တည်နေရာအတိအကျရှိရန်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းပေါ်ရှိရည်မှန်းချက်ဖြင့်ထောင်ပေါင်းများစွာသောတိုက်ပွဲများ, ခွင့်လွှတ်ခြင်းမရှိဘဲနှင့်မျက်တောင်ခတ်ခြင်းမရှိဘဲကြီးစိုး ကွဲပြားခြားနားသော Android ထုတ်ကုန်များ၏၎င်း၏အကွာအဝေးနှင့်အတူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း။
ဒီကနေ HTC အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ ၎င်းသည်ဤနောက်ဆုံးပေါ် HTC One X ကဲ့သို့ကြီးမားသောဆိပ်ကမ်းများကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ရန်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်နောက်ဆုံးတွင်အကျိုးခံစားရသူများမှာအမြဲတမ်းဖြစ်သည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - Facebook အိမ်မရှိဘဲ HTC ပထမ ဦး ဆုံး HTC M4
ရင်းမြစ် - the Verge
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » HTC မှပရမ်းပတာဖြစ်ခြင်း - အလုပ်ပြုတ်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုပြproblemsနာများနှင့်ပထမတစ်ခုသည်ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်သည်
Samsung Galaxy S4 model GT-I9505 ကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့အခမဲ့ဖွင့်ရမလဲ